Ny politikan'ny fiaramanidina dia sekretera vaovao misahana ny fitaterana any Etazonia no tokony hanaraka
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Ny politikan'ny fiaramanidina dia sekretera vaovao misahana ny fitaterana any Etazonia no tokony hanaraka » Page 10
Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Aprily 1, 2021
Ie. Michael, ahoana ny hevitrao momba izany? Satria karazana fifanekena ho an'i United ianao. I Sara's United ihany koa, mpitatitra lehibe izay tsara toerana raha toa ka mamela azy hahazo orinasa ny lalàna. Ary ny Alliance dia karazana tendro amin'ny moron'ny rano ary manandrana manao arak'izay vitanao raha tsy misy tsimatimanota fanoherana ny fitokisana sy ireo zavatra tena milamina sy marika. Fotoana ve hampiasana ity krizy ity ho fotoana hanovana ifotony ny fomba fijerin'ny seranam-piaramanidina?
Fantatro ny valin'io fanontaniana io taloha. Tsy azoko antoka izany. Fony aho tany United dia nandany fotoana be aho nanolo-kevitra ny hanaisotra ireo fameperana ireo mba hahafahan'ny orinasam-pitaterana hitovy amin'ny orinasa hafa. Saingy heveriko fa efa lasa karazana lehibe loatra isika ka tsy hahomby amin'ny lafiny sasany. Ka rehefa mihalehibe aho dia tsy azoko antoka fa tena manampy antsika izany. Ary fantatro fa ity dia karazana krizy indray mandeha anatin'ny zato taona, saingy io no farany tamin'ny 2009. Ary toy izany koa ny 9/11.
Ary isika dia nandalo krizy indray mandeha tao anatin'ny zato taona tao anatin'ny 30 taona lasa. Ary isaky ny mila mandray fanampiana federaly ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ka tsy azoko antoka fa te hanitatra ny vola fanampiana federaly tsy maintsy aloantsika isika amin'ity toe-javatra ity. Ka heveriko fa fanontaniana mendrika ny hijerena izany, saingy tsy azoko antoka fa nidina tamin'ny fanokafana mafy toy ny taloha aho.
Mahaliana. Sharon, manana eritreritra an'izany ve ianao? Ary, Sharon, tiako ihany koa ny hiresahanao, raha azonao atao, ny lafiny fiarovana sy ny lafiny fanamarinana. Hitanay ny IASA angamba milaza fa hametraka ny fanamarinana FAA hojerena akaiky kokoa izahay, raha jerena izay nitranga tamin'ny 737 MAX. Ary sahirana amin'izany fampandrosoana izany ianao? Lazao anay anefa aloha ny momba ny fahafaha-mitambatra sy fanamafisana, ary avy eo, raha afaka…
Ie. Ken, heveriko fa fanontaniana mahaliana avy amin'ny politika izany ary angamba amin'ny fomba fijery akademika kokoa. Ny tiako holazaina dia ny tanjon'ny fanovana ny fananana vahiny dia matetika no soratana ho fidirana amin'ny renivohitra. Ary zavatra iray heveriko fa tena mahaliana momba ny fomba nitantanan'ireo mpitatitra amerikana an'io krizy io dia ny hakingan'izy ireo laharana voalohany amin'ny fanapahana vola, nefa koa amin'ny fidirana an-drenivohitra. Ny fividianana vola amin'izao fotoana izao dia nahazo vola $ 65 miliara sy fananana ranon-javatra izahay. Ka mora ny fidirana amin'ny renivohitra amin'izao fotoana izao, mihena hatrany ny zanabola.
Ka raha zavatra azo ampiharina dia tsy zavatra resahin'ireo mpitatitra izany. [crosstalk 00:37:54]. Sahirana tokoa amin'izany fampandrosoana izany. Ary, averiko indray, heveriko fa tena hanohana an'ity governemanta ity isika mba hitarika karazana mpitarika sy hitana andraikitra lehibe kokoa ao amin'ny IKO ary na dia eo amin'ny fifandraisana roa tonta sy ny fifandraisana multilateral miaraka amin'ny eropeana aza. Vao avy nahazo ny fahatokisana antsika isika. Ary heveriko fa azo atao izany.
Sara, rahoviana isika no hiverina amin'ny ara-dalàna? Rahoviana isika no hahita ny ambaratonga mpandeha amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mandringana?
Heveriko fa raha mijery ny 100 taona lasa ianao, taorinan'ny gripa Espaniola, inona no nitranga, 20 taona nierona. Ny zavatra henontsika amin'ny olona dia raha vantany vao miroso ny fiarovana izy ireo, raha vantany vao azony mazava tsara dia vonona ny handeha izy ireo. Ka heveriko fa ny fahendrena mahazatra ankehitriny dia ny antenaintsika fa ho tonga amin'ny toerana izay manomboka miverina amin'io fahazoan-dàlana io isika amin'ny fahalavoana. Ary ho hitantsika izany fiverenana miverina izany, heveriko fa hiverina mierona haingana dia haingana tokoa aorian'izay.
Eny, fialam-boly ary amin'ny orinasa, satria maro ny olona no miahiahy momba ny fiovan'ny rafitra amin'ny dia.
Azo antoka. Ka eo amin'ny lafiny orinasa, andao ekena fa matetika ny fitsangatsanganana ataon'ny orinasa satria te hiaraka ny olona hamorona ireo fifandraisana ireo ary hanitatra ny asan'izy ireo izay hiresahantsika ny fivoriambe mitranga eo amin'ny lafiny orinasa. Tsy nisy izany. Hiverina daholo izany, ary hiverina izany satria misy toerana haleha.
Noho izany dia takianay ihany koa ny sisa amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy ny fizahan-tany mba hipetraka ihany koa mba hananan'ny olona zavatra hotetezana. Mifandray daholo. Ary mila izany rehetra izany amin'ny coronavirus isika mba hamerenantsika tanteraka izany. Fa izany dia mifandray mivantana amin'ny dia an-dry zareo koa.
Page 10 ny 10 Prev Manaraka
Ryanair dia manatsara ny làlan'i Budapest miaraka amin'i Shannon vaovao ...
IATA: Ny fangatahan'ny dia dia nanatsara ny volana Mey
Northern Pacific Airways hanidina fiaramanidina Boeing vaovao ...
Nampirisihina ny fitantanan-draharaha biden mba hanafainganana ny fanokafana indray an'i Etazonia
Ny areti-mandringana COVID-19 dia manimba ny tanjaky ny pasipaoro premium
Ireo Nosy Canary Espaniola dia miomana fa tsy ho ela ...
Fanesorana ny fameperana ny dia iraisam-pirenena mankany Etazonia ...
Frontier nandefa sidina Belst tsy an-kijanona avy any Denver ...
Tranga COVID-3 miisa 19 no nohamafisina tany Nouvelle Zélande
Sidina vaovao avy any Washington mankany Lagos, Nizeria amin'ny United ...
Ny sidina britanika avy any London Heathrow mankany Saint ...
IATA: Matoky ny fiarovana amin'ny sambo ny mpandeha ...
Fanarenana miadana ho an'ny fitsangatsanganana rivotra aorian'ny orinasa COVID